Vaovao - tanjon'i Meijer ny “any ankoatry ny kitapo” ary hampihena ny fako plastika
Meijer dia niara-niasa tamin'ny mpivarotra sakafo sy rongony hafa, niditra tao amin'ny alliance ho mpiara-miasa mpanampy ary namorona indray ny kitapo fivarotana mba hanampiana hampihena ny fako plastika.
Ny fifanekena dia natomboka tamin'ny fahavaratra mba hitsapana ny safidin'ny kitapo plastika azo ampiasaina ankehitriny ampiasain'ny mpivarotra lehibe manerana ny firenena. Ny "Beyond Handbag Initiative" an'ny consortium dia maharitra telo taona ary miantso ireo mpivarotra mba “hisaina ivelan'ny boaty.” Vahao ny olan'ny fako amin'ny harona plastika eran-tany.
"Ny filozofian'i Meyer dia orinasa tsara, tokony ho mpifanila vodirindrina isika," hoy i Meijer, filoha lefitra zon'ny Real Estate sy Real Estate Vik Srinivasan tao anaty fanambarana. "Manolo-tena izahay amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainana ary mino fa ny fandraisanay anjara amin'ity fandraisana andraikitra ity dia dingana iray lehibe hiantohana ny fahadiovan'ny taranaka any aoriana ny fiarahamonina."
Nanipika i Meijer fa ny Beyond the Bag dia mitady fomba hafa hanoloana kitapo plastika azo ampiasaina, mora ampiasain'ny mpanjifa ary tsara kokoa ho an'ny tontolo iainana. Ity asa ity dia natombok'ireo mpiara-miasa mihidy. Ivon-toekarena boribory, nifaneraserana tamin'ireo mpiara-miombon'antoka, anisan'izany ny mpamatsy, kojakoja fanodinana fitaovana, munisipaly, vondrona dokambarotra ary mpivarotra hafa ao Grand Rapids, Michigan, nilaza fa hampiroborobo ny vahaolana eny an-tsena ny orinasa mba hampisondrotra sy hanomezana tombony ireo mpanjifa.
Erik Petrovskis, talen'ny fanajana ny tontolo iainana sy ny faharetana ao Meijer, dia nilaza fa nanao ezaka lehibe amin'ny fampihenana ny plastika sy ireo fako hafa ilay mpivarotra ambongadiny. Ny volana janoary lasa teo dia nanokatra ny magazay kely voalohany i Meijer, ny tsenan'i Woodward Corner, izay tsy nanana harona plastika azo ovaina. Nanomboka tamin'ny 2014, ny magazay Meijer rehetra dia nametraka fitoeram-bokatra fanodinana ao amin'ny foyer fidirana mba hahafahan'ny mpanjifa mitahiry harona plastika madio sy maina ary sarimihetsika, ao anatin'izany ny fanary, mofo, fanadiovana maina, vokatra fambolena ary kitapo rano malefaka. Amin'ity taona ity dia manantena ny hamerina hanamboatra kitapo plastika 6 tapitrisa pounds ny orinasa, izay halefa any amin'ny foiben-toerany hanamboarana fanamboarana hanaovana deck.
Tamin'ny taon-dasa dia nanomboka nanampy ny marika How2Recycle tamin'ny fonosana marika manokana i Meijer mba hanampiana ny mpanjifa hahatakatra ny fomba fikirakirany ireo fitaovana ireo. Nilaza ny mpivarotra fa amin'ny 2022, Meijer fonosana dia hametraka ny marika How2Recycle amin'ny tena Fahamarinana rehetra. Tamin'ny taona 2019 ihany koa, Meijer dia nametraka tanjona fa amin'ny 2025, ny fonosana marika am-pivarotana dia vita amin'ny fitaovana 100% azo ampiasaina, azo averina na azo zohina.
Meijer dia manana ivon-toerana super 256 sy fivarotana enta-mavesatra any Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky ary Wisconsin.
"Ny fampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fanodinana entana dia olana lehibe ho anay sy ny mpanjifanay ary miasa mafy izahay hamaha ity olana ity," hoy i Petrovskis nanampy. “Manantena ny hijery ireo vahaolana vaovao azo avy amin'ity fiaraha-miasa ity aho.”
CVS Health, Target, ary Wal-Mart no consortium izay namorona indray ireo mpiara-miasa mpanorina kitapo fivarotana ary Kroger no mpiara-miombon'antoka voalohany amin'ny vondrona fivarotana enta-madinika. Walgreens dia nandray anjara ho mpiara-miasa mpanohana ary ny orinasa mpamatsy vola Closed Loop Partners ho mpiara-mitantana. Hy-Vee no mpiara-miasa manohana, ary Dick's Sporting Goods no mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny sehatry ny varotra sy ny varotra ivelany.
Goavana ny refin'ny fanamby. Ny kitapo plastika azo ampiasaina dia be mpampiasa amin'ny lafim-piainana, indostria ary faritra rehetra. Ny famahana ny fanamby amin'ny fako amin'ny rafitra dia mitaky ny fampivondronana ireo mpiray antoka hamaha ireo olana mahazatra. Hoy i Kate Daly, talen'ny fitantanana ny toekarena boriborintany ho an'ny mpiara-miasa amin'ny Closed Loop. Niara-nanamboatra ny kitapo fivarotana avy tao anaty boaty izahay, ary manentana ny mpivarotra hafa hanaraka anay.
Fotoana fandefasana: Mar-27-2021
Bolt firafitra, Bolts amin'ny kalesy, Hex Bolts, Lag Bolts, Masinina Sodina Pipe, U Bolts,